बेस्टसेलर कारखाना - Himalkhabar.com
ब्लगबुधबार, साउन २७, २०७२
साहित्य लेखनको शुरूमै ‘बेस्टसेलर’ उत्पादन कारखानाको कारिन्दा बन्न पाउनुलाई अहोभाग्य नै त भन्नु पर्‍यो नि!
थाकेको ज्यान र मरियल मन लिएर घरतर्फ घिसारिंदै गर्दा स्कूले दौंतरी चिन्तामणि ‘थकेला’ सँग भेट भयो।
साथीको अँध्यारो मुख नियालें। उनी थप हौसिए, “छापेरै भ्याइएन, बजार पुर्‍यायो कि चरिझयाप भैरा’छ!”
खल्ती झारझुर पार्दा कुल एक थान किताब बराबरको पैसो निस्क्यो।
यो गतिको पाठक भएको मुलुकमा अचेल साहित्यको बजार गर्माएको छ भन्छन्। अर्थात्, शारदेका साधकमाथि माता लक्ष्मीको कृपादृष्टि पर्ने आफैंमा अवैज्ञानिक विधि लागू भएको छ।
आँतमा इन्धन नपरी दिमाग नघुम्ने, दिमागी हलचल विना कलम नसर्ने विज्ञान हिजोआज विदामा बसेको छ भने बजारको यो तातो तावामा मैले मात्र किन हथौडा नमार्ने?
नभन्दै, साथी ‘थकेला’ बाट समेत प्रेरणा लिएर लेखनीलाई के धिकिरधिकिर पारेको थिएँ, बजारमा दश/बीस हजार प्रति पुस्तक टापटिपै तुरिएको खबर सुन्नुपर्‍यो।
कतिसम्म भने, मैले सिनेमा निर्माणको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर लेखेको पहिलो उपन्यास ‘घुम्तीभन्दा अलि तल्तिर भेट भयो’ का प्रकाशकले पहिलोबाजीमै पाँचौं संस्करणसम्म छाप्न भ्याइदिन्छन् कि भन्ने झ्स्कना समेत भयो।
“पाठकहरूलाई यो किताब नपढ्दा जिन्दगीको जँघार तरिंदैन भन्ने लागेको मालुम हुन्छ”, प्रकाशकले जानकारी गराए। बस्, माहोल यस्तो छ भने रोडपति लेखकलाई करोडपतिमा दरिन कति बेर लाग्ला? लेखेको अक्षर खेर नजाने कुरा, कुरै मात्र होइन रहेछ।
साहित्य कमसल भए त्यसले नवलेखकलाई लेख्ने आत्मविश्वास दिंदोरहेछ। त्यो सोचले मलाई एउटा शानदार प्रकाशन गृहको प्राङ्गणमा टेकायो।
अफिसको चकाचौंधले नेपाली पुस्तक बजारको तेजीमाथि शंका नगर्न दिइरहेको संकेत बुझदै सम्पादकको खोजी गर्दा मार्केटिङ विभागका ‘एक्जिक्युटिभ’ हरूले प्रकाशक महोदयको च्याम्बरतिर सोझयाइदिए।
त्यहाँ लेखकहरू धनुष्टंकार मुद्रामा हात मोलिरहेका थिए। तीमध्येका एकले हेडसरको हप्की थेग्न सकेनछन्, लल्याकलुलुक प्राविका भुरा माफिक मुर्गासनै गर्न खोजे।
“छोक्रे/बोक्रेहरू बेस्टसेलर बनिरहेको वेला मेरो किताबले त बम्पर सेल नै गर्ला” म आफैं झाँक्री बन्न अग्रसर भएँ।
लिटमाण्डुको ‘कास्टिङ्ग काउच’ सम्झ्ँदै सम्झ्ौता गरेर मैले सोधे, “लेखकस्व चाहिं के–कस्तो होला नि हजुर?”
प्रकाशक बोले, “पूँजीको नाफा, साहसीलाई सलामी, विज्ञापन खर्च, मार्केटिङ्ग कस्ट र ‘पेड’ समीक्षकको ज्याला सहित समग्र ठेलुवा मेकानिज्मलाई सिदा पुर्‍याउँदा उब्रेछ भने लेखकले अवश्य दक्षिणा पाउँछ!”